Sony Xperia XZ Premium wuxuu ahaa taleefoonkii ugu fiicnaa MWC 2017 | Wararka IPhone
Sony Xperia XZ Premium wuxuu ahaa taleefankii ugu fiicnaa ee MWC 2017
Markii ay soo dhowaatay dabaaldegii MWC, waxaa la xaqiijiyay in Samsung aysan soo bandhigi doonin calankeeda cusub, Samsung Galaxy S8, oo ah war kharibaya dhacdada, tan iyo markii shirkadda Kuuriya ay soo bandhigeysay astaanteeda munaasabaddan dhowr sano. Shirkadda Kuuriya ayaa qorsheyneysa in qalabkan cusub lagu soo bandhigo 29-ka Maarso magaalada New York, sidii ay kal hore ku sameysay Galaxy Note 7, oo ah terminaal ay ahayd in laga saaro suuqa qaraxyadii ay la kulantay awgood. Maqnaanshaha Galaxy S8, qalabka soo jiitay dareenka ugu badan ee MWC isla markaana loo tixgeliyay inuu yahay taleefanka casriga ah ee ugu wanaagsan carwada ayaa ahaa Sony's Xperia XZ Preimum.
Waxa ugu xiisaha badan ee ku saabsan aaladani waa suurtagalnimada duubista fiidiyowyada HD-ka ah 960 fps, oo ah xaddiga guud ee illaa iyo hadda aan lagu arkin wax casriga ah. Hadda iPhone 7 wuxuu noo ogolaanayaa inaan duubo ugu badnaan 240 fps. Waxyaabo kale oo cusub oo ay soo bandhigtay terminaalkan ayaa ah haddii ay maamuli doonto Snapdragon 835, oo ah jibbaar sida ku xusan warar badan oo la heli karo oo keliya markii ugu horreysay ee Galaxy S8, taas oo ku qasabtay LG in ay u adeegsato Snapdragon 821 astaanteeda, G6, kaas oo sidoo kale lagu soo bandhigay carwadan, laakiin aan ku guuleysan inuu ku guuleysto abaalmarinta taleefanka casriga ah ee ugu wanaagsan.
Xperia XZ Premium sidoo kale waa taleefankii ugu horreeyay ee adeegsada shaashad leh 4k qaraar, qaraar si dhab ah u saameyn doona batteriga aaladda, marka lagu daro bixinta tayada oo si muuqata loogu arki karo kaliya 5,5 inji. At Sony iyagu doqon ma ahan oo qaraarkan waxaa la isticmaali doonaa oo keliya marka waxyaabaha la soo bandhigayo ay soo bandhigaan qaraarkan, dhanka kale, xalinta labada menus iyo codsiyada labaduba waxay noqon doonaan Full HD. Marka laga hadlayo qiimaha terminalkan, shirkaddu ma aysan shaacin laakiin waxay noqon doontaa midka ugu sarreeya shirkadda, sidaas darteed waxay ku xoqi doontaa garbaha qiimaha ugu sarreeya. inta udhaxeysa $ 750 iyo $ 850. Imaanshahooda ayaa la filayaa qeybta hore ee sanadka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Tartanka » Sony Xperia XZ Premium wuxuu ahaa taleefankii ugu fiicnaa ee MWC 2017
Ciise Barreiro Taboada dijo
Waqtiga ku haboon ☺️ waxaad kuhadashay sida ilaahay si waadax ah amro waana cadahay in Sony Xperia XZ Premium uu uqalmo ...
Ku jawaab Jesús Barreiro Taboada
Faallo ku saabsan ereyga: qoraal kooban oo kooban, waxaad ku celcelisay ereyga "calanka" saddex jeer. Waxaan kugula talin lahaa thesaurus waqtiga soo socda. Dhamaan wanaag.
"Cusub" 6GB iPhone 32 ayaa dib loogu iibiyay Aasiya
Dhexdhexaadku wuxuu bilaabayaa 'Sheekooyin' u gaar ah maxaa yeelay wax nagu filan kamaanaan helin